Chandler Canterbury – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
After.Life (2009) ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်ကားတွေ နှစ်သက်သူတွေအတွက် ဒီကားကတော့ အကြိုက်တွေ့မှာသေချာပါတယ်။ မင်းသမီးက သေသွားပြီလား မသေပဲ အဖမ်းခံထားရတာလား ? ဖာသာကကော ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ? မင်းသမီးရဲ့ ချစ်သူကကော ဘယ်လိုမျိုး ကြိုးစားမလဲ အစရှိတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ကြည့်ပါအုံး
IMDB: 5.9/10 34,278 votes
Knowing (2009) Nicolas Cage ရဲ့ 2009 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သိပ္ပံဆန်းကြယ် ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကမ္ဘာပျက်မဲ့ အကြောင်း နိမိတ်တွေပြတဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မကြည့်ရသေးသူများ ကြည့်ကြည့်ပါအုံး
IMDB: 6.2/10 207,126 votes